Coinbase anobatana Earn.com - Blockchain News
Kubvumbi 16, 2018 arun
Cryptocurrency Exchange Coinbase akazivisa kuzviwanira Earn.com, Anonzi for $ 120M.
Earn.com, mumwe indasitiri yakanakisisa mari startups, uye kare se 21 Inc. akamhanya ari Bitcoin mugodhi oparesheni, dzinofambiswa ne ano kubva Intel, uye gare gare vatanga kwayo yokuvaka chakabatikana “21 Bitcoin Computer” mu 2015.
The makasimba rebranded kuna Earn.com wokupedzisira October ari pivot kuti akazviona nokuparura social network zvainanga incentivizing vanoshandisa kupedza mabasa mukutsinhana cryptocurrency mibayiro.
svondo rino Coinbase zvakaziviswa: “Kuwana hwakavaka akabhadhara tsambambozha chigadzirwa chiri arguably mumwe tanga anobatsira blockchain chikumbira vabudirire hunogutsa traction. Tichafara kuchengeta Mubayiro yezvebhizimisi kumhanya nokuti zviri kuratidza yakawanda vimbiso uye zvinogona.”
ZveBelgium mutero simba ari kutsvaka mitero vanoshandisa Foreign Crypto Exchanges
MuBelgian mutero auth ...
kudzidza anoratidza 27% pamusoro ...
Previous Post:Germany No. 2 Stock Exchange urongwa pakatanga of Crypto Trading App
Next Post:Inishuwarenzi bhuroka Marsh anoshanda IBM musi Blockchain papuratifomu
Chivabvu 8, 2018 pa 5:53 PM